Kenya: Baaqii Odinga oo u Muuqda inaan la Dhageysan
Mucaaradka dalka Kenya ayaa shacabka ugu baaqay inaysan maanta oo isniin ah shaqo tagin, hase yeeshee jawaabtii baaqaas laga bixiyey ayaa u muuqata mid xaddidan, ayada oo inta badan ganacsiga uu furan yahay.
Deegaanka Kibera oo ah isku raranka ugu weyn Nairobi, oo mucaaradka ay ku xoogan yihiin, ayaa waxaa shaqeynaya taksiyada, ayada oo dukaamada cuntada iyo kaararka taleefonada albaabada loo furay.
Hase yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegaya in dad badan ay dhaqan-gelinayaan baaqa mucaaradka ee ah inaan la shaqo tagin, sababo la xiriira tuhunka ku sabsan in doorashada lagu shubtay.
Guddiga doorashada ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta u iclaamiyey inuu doorashada ku guuleystay, uuna 1.4 milyan oo cod ka saro maray Raila Odina. Sidoo kale kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay in codbixintu ay u dhacday si sax ah.
Ken Nabwere oo degan Nairobi, ayaa sheegay inuusan haysan ikhtiyaar aan ahayn inuu shaqo tago, inkasta oo uu taageero isbaheysiga mucaaradka ee NASA.
“Waxaa la iga doonayey inaan codeeyo, wixii kasoo harana waxaan u daynaa siyaasiyiinta. Haddii aan shaqada ka joogo maanta, kuwaas ma bixin doonaan biilashayda” ayuu yiri.
Inkasta oo Odinga uu sheegay in doorashada laga shubtay, ayaa haddana isbahaysigiisa NASA waxay meesha ka saareen inay maxkamadda u dacwoon doonaan, ayaga oo sheegay inay qorshahooda ku dhawaaqi doonaan talaadada.